Allgedo.com » Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya oo ku dagaalamay gobolka Bakool
Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya oo ku dagaalamay gobolka Bakool
Print here| By: allgedo.com: Sunday, December 9, 2012 // 1 Jawaab
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ay halkaas ku dagaalameen ciidamada dowlada Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Itoobiya iyo ciidamada Shabaab.
Labada dhinac ayaa isku adeegsaday hub aad uxoogan, iyadoo labada dhinac ay guullo ka kala sheegteen dagaalkan ka dhacay degmada Ceel-Barde ee gobolka Bakool.
Isagoo lahadlayay saxaafada ayaa Gudoomiyaha Degmada Xudur Maxamed Macalin (Dhalo-dheere)waxaa uu sheegay in ciidamada dawlada iyo kuwa itoobiyaanka ay iska difaaceen weerar ay kusoo qaadeen al shabaab sida uu hadalka udhigay gudoomiyaha.
“Ciidamadeena iyo walaalaheen itoobiya waxaa weerar fuleynimo ah kusoo qaaday nabadiidkii al shabaab la dhahaayey,laakiin cashar ayaan udhigay feylante,wax khasaaro ah nama soo gaarin inaga ayuu yiri Gudoomiyaha oo af maay maayga ku hadlayey”.
Sidoo kale al shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalkii xalay ka dhacay duleedka degmada Ceel barde ee gobolka Bakool iyagoo sheegay inay dileen askar badan oo dawlada iyo itoobiyaan iskugu jiray sida ay sheegeen.
Sargaal uhadlay Al shabaab ayaa tibaaxay in dagaalkaasi gaari Uuraal ah lagu gubay ciidamo cadad uusan sheegina ku dileen sida uu yiri kaasi oo qaniimo hub ahna ay ka heleen sida sargaalkaasi andalus usheegay dagaalkii ka dhacay Ceel barde duleedkeeda.
Dagaaladan ayaa qeyb ka ah dagaalo inta badan ciidamada dowlada iyo kuwa Shabaab ku dhexmaray gobollada dalka gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool.
1 Jawaab " Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya oo ku dagaalamay gobolka Bakool "
maxeey ku dhacday in balcad iyo jowhar dagaaal ka dhicin gedo oo abaar ahna jihaad lagu hoobto timir laf baa ku jirta